FAQs - Hebei Shuolong Metal Products Co., Ltd.
Iscreen seScreen seScreen seScreen
Ukuthuka nokuKhusela i-Metal mesh
I-Elevator kunye neNdawo yangaphakathi yoKhonkco lwelaphu leLinen
Ukuhonjiswa kwesilingi Mesh
Ulwahlulo lwangaphakathi Mesh
Ifanitshala Ifaka i-Metal Mesh
Glass elaminethiweyo Metal eyolukiweyo
I-Metal Mesh Curtain
Amaxabiso ethu axhomekeke kutshintsho kuxhomekeke kunikezo kunye nezinye izinto zentengiso. Siza kukuthumela uluhlu lwamaxabiso ahlaziyiweyo emva kokuba inkampani yakho iqhagamshelane nathi ngolwazi oluthe kratya.
Unawo umyinge wobuncinci beodolo?
Ewe, sifuna ukuba ii-odolo zamazwe onke zibe nobungakanani be-odolo eqhubekayo. Ukuba ujonge ukuthengisa kwakhona kodwa ngobuncinci obuncinci, sicebisa ukuba ujonge iwebhusayithi yethu
Ewe sinokubonelela ngamaxwebhu amaninzi kubandakanya iZatifikethi zoHlahlelo / ukuVumelana; I-inshurensi; Imvelaphi, kunye namanye amaxwebhu okuthumela kwelinye ilizwe apho kufuneka khona.
Leliphi ixesha eliphakathi lokukhokela?
Iisampulu, ixesha phambili malunga neentsuku ezisi-7. Kuba imveliso mass, ixesha phambili iintsuku ezingama-20-30 emva kokufumana intlawulo yedipozithi. Amaxesha akhokelayo asebenza xa (1) siyifumene idiphozithi yakho, kwaye (2) sinemvume yakho yokugqibela yeemveliso zakho. Ukuba amaxesha ethu akhokelayo awasebenzi nomhla wokugqibela, nceda uye kwiimfuno zakho ngentengiso yakho. Kuzo zonke iimeko siya kuzama ukulungiselela iimfuno zakho. Kwiimeko ezininzi siyakwazi ukwenza njalo.
Ngaba loluphi uhlobo lweendlela zokuhlawula ozamkelayo?
Ungenza intlawulo kwi-akhawunti yethu yebhanki, kwi-Western Union okanye kwi-PayPal:
I-30% yediphozithi kwangaphambili, i-70% ibhalansi ngokuthelekiswa nekopi ye-B / L.
Iwaranti yezixhobo zethu kunye nokwenza umsebenzi. Ukuzinikela kwethu kukoneliseka kwiimveliso zethu. Kwiwaranti okanye hayi, yinkcubeko yenkampani yethu ukujongana nokusombulula yonke imiba yabathengi ukoneliseka ngumntu wonke
Ewe, sihlala sisebenzisa ukupakisha okuphezulu kumgangatho. Sikwasebenzisa ukupakisha ingozi enobungozi kwiimpahla eziyingozi kunye nokuhambisa okubandayo okugcinwe kubandayo kwezinto ezinobushushu. Ukupakishwa kweengcali kunye neemfuno zokupakisha ezingekho mgangathweni zinokubangela intlawulo eyongezelelweyo.
Iindleko zokuhambisa zixhomekeke kwindlela oyikhethayo yokufumana iimpahla. Ukuthetha ngesiqhelo yeyona ndlela ikhawulezayo kodwa kunye neyona ndlela ibiza kakhulu. Ngokuya elwandle sesona sisombululo sisiso semali enkulu. Ngokuchanekileyo amaxabiso ezinto sinokukunika kuphela ukuba siyazazi iinkcukacha zesixa, ubunzima kunye nendlela. Nceda unxibelelane nathi ngolwazi oluthe kratya.
UFUNA UKUSEBENZA NASI?
Ifeksi: + 8631187543478
Ingaba ufuna ukwazi ntoni?
iveliso ezifakiwe, Imephu yendawo, Zonke iiMveliso